Amaqiniso ayi-7 odinga ukuwazi ngaphambi kokusebenzisa i-Fox Red Lab - Izinhlobo
Kuzo zonke izinhlobo zezinja emhlabeni, ayikho efana nesithonjana njengeLabrador.
AmaLabradors ingahle ifike kuphela ngemibala emithathu esemthethweni, kepha kukhona uhla olubanzi lwe-shades phakathi.
Ngokwesibonelo, I-Fox Red Labs ibukeka njengeLabhocolate enamandla kakhulu, kodwa empeleni iyinhlobonhlobo yeLabhu Ephuzi ! Kuyathakazelisa akunjalo?
Funda kabanzi ukuthola kabanzi ngalo mbala oyingqayizivele.
Ivelaphi iRed Labradors?
Ngabe iRed Lab (Red Labrador Retriever) ibukeka kanjani?
Ubuntu: Imuphi umbala weLabrador ongcono kakhulu?
Ungayinakekela kanjani iRed Labrador yakho
Izinkinga zezempilo zeRed Labrador
Ingakanani Imidlwane Yebomvu Ebomvu?
Ngubani okufanele athole inja yeRed Lab?
Ezinsukwini zokuqala zeLabrador Retrievers, zazimnyama futhi zimhlophe. Kwaze kwaba ngasekupheleni kweminyaka yama-1800 nasekuqaleni kwawo-1900 lapho baqala khona ukuzalanisa iBlack Labradors eqinile. Noma imiphi eminye imibala yayikhona kukhishwe lapho kuzalwa .
Yize kungacaci ukuthi iFox Red Labrador yaba khona nini, zazivame kakhulu emuva ngaleso sikhathi. AmaLabhu Ephuzi okuqala nawo ayemnyama futhi azalwa enama-tinges eRed .
Imibala yengubo yenja ifana nesitatimende semfashini, futhi njenganoma yimuphi umkhuba, iyaxhuma futhi yehle ngezikhathi. Sonke sifuna okungajwayelekile.
Emuva osukwini, amaBlack Labs aqinile ayethukuthele, kuze kube yilapho abantu beqala ukufisa amaLabhu Ephuzi noma amaRed angabonakali kangako.
Lapho sebedume kakhulu, amaRed Labs namaYellows amnyama awathandwa.
Namuhla, amaLabhu aphuzi aphuzi ajwayelekile kakhulu ngenxa yokuqhuma kokuthandwa ngawo-1970. Lokhu kwenze amaRed Labs angavamile futhi futhi manje yaphenduka impahla .
Ngokufana nomzala wabo, i- I-Red Golden Retriever , Amalebhu analawa majazi anemibala ye-russet athathwa njengokuphikisana ngoba nje awahlangabezani nokulindelwe kwendabuko.
Abanye abantu bathi amaRed Labs awele nge I-Vizsla , futhi empeleni awekho msulwa. Izicelo ezifanayo zenziwe ngeSilver Labradors.
Ama-purists aqinisekile ukuthi iLabradors ayinazo izakhi zofuzo zokuba yiSiliva ngokwemvelo, ngakho-ke kufanele iwele ne Weimaraner .
Lezi zimangalo azikaze zifakazelwe . Ngaphezu kwalokho, ngenkathi iVizsla's ifana neLabradors ngosayizi futhi inamandla afanayo, mncane kakhulu kuneLabrador eyakhiwe kahle.
Ngaphezu kwalokho, ukubheka okukodwa kofuzo lwabo kuzokhombisa ukuthi kuyinto kungenzeka ngokuhlukahluka kombala ohlotsheni.
Yiziphi izakhi zofuzo ezakha iFox Red Labrador?
Ngaphambi kokuthi singene kwisayensi ngqo yeFox Red Labrador, kufanele siqale siqonde ukuthi izakhi zofuzo zisebenza kanjani.
Inja ngayinye izuza i-allele kumzali ngamunye eyakha ufuzo . Lokhu kuphakama kungabusa noma kube ngokweqile. Zivame ukubhalwa ngababili, njengeBB noma iBb, eyodwa yomzali ngamunye.
Kunama-loci ambalwa anquma umbala wejazi, kusuka ku-A locus kuya ku-E locus. I- I-al al iwuhlobo olumnyama olukhulu futhi ingaholela enjeni emnyama . Eqinisweni, zonke izinja ezimnyama okungenani zinokuma okukodwa okuphezulu kwe-B.
Ama-Black Labs angaphatha ifayili le- okweqile b futhi lapho ababili bakhona, uzothola iLab Chocolate. Noma kunjalo, isakhi esilawula i-pigment ensundu silele endaweni ye-E.
Ukuthola iLab Lab Ephuzi, kumele babe nezinciphiso ezimbili ee alleles . Lolu hlobo oluncane olunamandla luyakwazi ukuvimba ngokuphelele umbala omnyama obusayo, luyicindezele ngakho kuphela okuphuzi okuzayo.
Manje kuza izakhi zofuzo ezakha ophuzi omnyama esiwukhomba njengeFox Red: the a no-c alleles . I-A imele i-pheomelanin enjeni yakho, yona iza ngezindlela ezahlukahlukene lokho kungathinta ijazi.
Le ngxenye ye-genetics yombala ingaba yinkimbinkimbi impela, kepha izinguquko ezihlukile zingaholela emiphumeleni ehlukile. Isibonelo, ngentando kuzokhiqizwa iBlack and Tan Labradors.
Endabeni yeFox Red Labradors, kuvame ukubukeka uku s . Uma bezuza njengefa allele TO s , inja ingaba ukhilimu noma imhlophe ngoba leyo yi-pheomelanin ecindezela i-allele.
Ukuqina kombala kuvezwa yi c allele , ngakho inja nge DC bazoba nomthunzi omnyama, labo abane- DC kuzoba maphakathi nobubanzi, namaLabhu abe ne- DC I-gene kungenzeka ibe lula.
Uhlobo oluthile lwe-C locus luzoholela ku-White Labrador.
Ukuze uthole i-Fox Red Lab, inja izodinga ukuba nakho kokubili DC futhi ee kanye ne uhlobo olulungile lwe-A locus , okwenza i-Fox Red Lab puppy ibe yinto ekhethekile impela.
Ngokusho kwe-AKC , I-Labradors Ephuzi ingaba yi-Fox Red kuya ku-Light Cream futhi ingaba nokuhlukahluka kombala ezungeze izindlebe, emuva, noma ngaphansi.
Ngakho-ke ngokwezinga lokuzala, AmaLabradors analo mbala weFox Red afanelekile ukuncintisana eringini lombukiso , inqobo nje uma zingumbala oqinile. Ngeshwa, abahluleli bavame ukuthanda ukukhanya okukhanyayo okuphuzi .
Umdansi , iRed Lab, wagcotshwa njengompetha e-United States ngonyaka ka-2011, nokumenza abe yiRed Lab yokuqala ngalesi sihloko.
I-American Kennel Club ithi iLabradors kufanele ilingane, ibe nokwakha kwemisipha. Akufanele babe nokuqina ngokweqile, njengoba uhlobo luqala futhi ngokuyinhloko luyinja esebenzayo futhi kufanele lube nomzimba wokulingana.
Lokhu akusho ukuthi ngeke ukwazi ukuthola izinja zokubonisa ezibomvu. Ngokuphambene nalokho, abalimi balwa kanzima kakhulu ukukhiqiza ompetha bezinja abaningi bezinhlobonhlobo ezibomvu.
Ama-American Red Labs vs i-English Red Labs
Lawa amalebula awalona igama elifanele njengoba izinja ezisebenzayo zibizwa ngama-American Labs, kanti izinja zokubonisa zibizwa ngamaLabhu esiNgisi.
Ama-Red Labs esiNgisi ayivelakancane impela , azikho isikhathi eside ngokwanele ukuba ziphumelele kakhulu njengabalingani bazo abavame ukubalabala.
Kodwa-ke, lokhu kuyashintsha kancane kancane njengoba amajaji esamukela ngokwengeziwe.
Njengoba amaLabhu esiNgisi ekhiqize ukuqinisekiswa kombukiso ikakhulukazi azoba ophuzi bendabuko, ushokoledi, noma umnyama.
Ngakolunye uhlangothi, amaLabhu aseMelika ayizinja zasensimini futhi afuyelwa amakhono awo ngaphezu kokubukeka kwawo. Lokhu kusho ukuthi banethuba elingcono lokuba bomvu ngoba ukubukeka akubalulekile kumzingeli noma kuzingelwa.
Ngokuvamile abanalo ikhanda eliyimbulunga amaLab English ayaziwa ngalo. AmaLabhu aseMelika nawo abukeka kakhulu kwezemidlalo . Ungaqhubeka uqhathanise lezi zinhlobo ezimbili neshadi lethu.
Lokho okushiwoyo, iningi lamaFox Red Labs angamaLabradors aseMelika .
Ingabe amaFox Red Labs makhulu kunamanye amaLabhu?
Lezi zinja ezizingelayo ziwuhlobo oluphakathi kuya kolukhulu, olunesisindo cishe kuma-55 kuya kuma-80 lbs (25 kuya ku-36 kg), kuya ngobulili.
Abesilisa kufanele babe phakathi kwamasentimitha angama-22.5 kuya kwangu-24.5 (57 kuya ku-62 cm) ubude, kanti abesifazane kufanele babe ngamasentimitha angama-54 kuya kwangu-23.5 (54 kuya ku-59 cm). Ngeminye imininingwane ngosayizi wabo, ungabheka Ishadi Lethu Lokukhula Lab.
Ingabe i-Fox Red Labs iyashintsha umbala?
Imidlwane ezalwe nejazi leFox Red kungenzeka ingagcini lowo mthunzi obomvu . Imvamisa iyakhanya noma iba mnyama ngobudala. Kunzima ukuqiniseka ngombala wabo wokugcina wejazi kuze kube yilapho kunjalo okungenani izinyanga ezingama-20 kuye kwangama-24 ubudala.
Amabala amhlophe esifubeni avame kakhulu phakathi kwe-Yellow Labradors futhi njengoba iRed Lab empeleni iyiLabhu Ephuzi, kungenzeka ukuthi nabo banayo.
Le mismark ayisho ukuthi ayizalwanga, isho nje ukuthi ifana kakhulu nokhokho bayo baseNewfoundland!
Ungafunda kabanzi mayelana ne- Imibala yeLabrador isihloko.
Umbala awubeki imizwa yeLabrador. Zonke zivumelana nezindinganiso zohlobo lokuthembeka, ukuphuma nokuba nomusa. Labradors bamane nje bangabangane abakhulu babo bonke abantu .
Lezi zinja ezimnene ziyisengezo esihle kunoma yimuphi umndeni, noma ngabe unengane encane noma isilwane esincane, inqobo nje uma i-pooch yakho ihleli kahle.
Labradors konke bayakuthanda futhi bayathanda ukuba nabantu babo . Uma bengakutholi ukunakwa abakufisayo, bangahle baphendukele ebubini.
Njenganoma iyiphi inja, amaLabradors angaphathwanga kahle noma angaqeqeshiwe angaba namandla okusaba noma abe nolaka.
Kuye kwaphawulwa ukuthi amaRed Labs kungahle kube barkier kodwa ngenkathi bezokhonkotha abangabazi, kumenywa kakhulu ukudlala kunesexwayiso.
Ngokuqeqeshwa okungaguquguquki, kufanele ukwazi ukufundisa inja yakho ukuthi iziphathe ngendlela ofuna ngayo.
Ama-Labs abomvu akunzima neze ukunakekela kunanoma yimuphi omunye umbala. Zidinga inani elifanayo lomzamo ekuqeqesheni, ekuzivocavoceni nasekulondolozeni.
Ukhiye wenja enhle ukudala imikhuba emihle. Njengoba amaLabradors athanda ukuncenga ama-munchies angeziwe, ungangeni kumkhuba wokumfunza noma yini ngaphandle kokudla kwenja .
Gcina okusalungiswa kwetafula lakho kusigaxa sikadoti esikhundleni salokho.
Enye into ukuthi, ufuna ukugcina iLabrador yakho ijabule, ngaphandle kombala. Labradors abakwazi ukuma bored noma yedwa , ngakho khumbula lokho ngaphambi kokuhlala kwiLabrador Retriever.
Usebenzisa ama-Red Labs akho
Njenganoma iyiphi i-Labrador, i-Fox Red Labrador Retrievers iyawathanda amanzi! Ukuba ngabazingeli bezinyoni zamanzi nabangane abakhulu babadobi, ukubhukuda kumvelo yabo uqobo .
Ukuba yinja esebenzayo, bakhuthele kakhulu. Ukwehluleka ukubanikeza ukukhuthazeka abakudingayo kuzogcina ngemiphumela eyinhlekelele njengoba bengathola umonakalo omkhulu impela.
Zama ukusebenzisa okungenani ihora ngokuzivocavoca nsuku zonke. Kodwa-ke, awufuni ukweqisa kuyona iminyaka emibili yokuqala yokuphila kwabo njengoba kungadala ukuthi bahlakulele izinkinga ezihlangene.
Futhi, iLabradors ingahle ithambekele ekusebenziseni ngokweqile, ngoba balangazelela kakhulu ukujabulisa, kwesinye isikhathi bayakhohlwa imingcele yabo futhi kukuwe ukuthi uqiniseke ukuthi abaziphusheli kude kakhulu.
Ngabe ukulungisa i-Red Lab yakho kudla isikhathi?
Njenganoma iyiphi iLabrador, zinengubo ephindwe kabili edinga ukunakwa okuncane. Konke okuzodingeka ukwenze ukuze uhlale uphilile ukukwenza ibhulashi kanye ngesonto .
Uma kuyisikhathi sokuchitha, abanikazi abaningi bathanda ukusebenzisa ithuluzi lokususa deshedding ukususa iningi lejazi elingaphansi. Uma ungakhathazeki kakhulu ngakho, ukuxubha nsuku zonke nge-brush ejwayelekile ye-slicker kuzokwenza.
Kufanele futhi usike izinzipho zabo njalo. Njengoba bathambekele ekungenweni yizindlebe, kungcono ukuthi bahlanze izindlebe zabo njalo uma beyobhukuda.
Eminye imithombo ithi iFox Red Labs inephunga elinamandla kunabazala babo abaphuzi abaphaphathekile ngoba bavame ukukhiqiza owoyela abaningi.
Enye indlela yokubhekana nalokhu ngukuzomisa kahle futhi uziqhelelanise nama-shampoo anokhahlo.
Ama-shampoo akhumula uwoyela wemvelo engutsheni yenja azozikhuthaza ukuthi zikhiqize ezengeziwe ezizokwandisa inkinga.
Ukondla iRed Lab yakho
Njengoba lolu hlobo lwe-gundog lungaba othambekele ekukhuluphaleni ngokweqile , ungahle uthande ukubheka ukudla okuphekwe ekhaya noma ukudla okuphelele esikhundleni salokho.
Uma ukondla i-kibble, khetha i-kibble esezingeni elifanele izidingo zabo zokudla.
Ngenja enkulu yokuzalanisa, kufanele bondliwe i-kibble eyakhiwe ngokukhethekile engaphakeme kakhulu nge-calcium ne-phosphorus. Lokhu kuzobavikela ku-hip dysplasia .
I-kibble enhle kufanele ikwazi ukuhambisana nezidingo zazo zekhalori futhi ibasize baphathe isisindo sabo. I-kibble esezingeni eliphansi ayihlinzeki ngezakhamzimba ezidingwa yinja, okuholela ekutheni zidle kakhulu.
Ukuthola ukuthi yikuphi ukudla okungcono kakhulu kweLabrador yakho, ungabheka lolu hlu.
I-Red Fox Labradors inayo impilo efanayo njenganoma iyiphi enye iLabrador . Ungalindela ukuthi baphile iminyaka eyi-10 - 12 ngokwesilinganiso.
Onke amaLabradors abelana ngezinkinga ezifanayo zezempilo kepha kuye kwaphawulwa ukuthi izinkinga zamehlo zivame kakhulu eRed Labradors.
I-Progressive Retinal Atrophy ukugula kwamehlo okudala ubumpumputhe futhi kungagwemeka kalula ngokuhlola.
Ngaphandle kwalokho, kuzodingeka ubheke okujwayelekile, kufaka phakathi i-hip ne-elbow dysplasia, umdlavuza, izinkinga zendlebe, i-muscular dystrophy, i-idiopathic epilepsy, nokuwa okubangelwa ukuvivinya umzimba.
Njengoba kushiwo, ukukhuluphala ngokweqile kuvamile kumaLabradors. Lokhu kungathinteka ukuguqulwa kwezakhi zofuzo lokho kubavimba ukuba bazizwe begcwele.
Lapho usesha umdlwane weLabrador Retriever wombala othile, kufanele uqaphele kakhulu ukuthi ungakhohliswa.
Khumbula ukuthi abafuyi abahloniphekile kaningi abakhokhisi ngaphezulu ngemibala ehlukene ngoba ukuzalanisa umbala kubukelwa phansi kakhulu.
Kodwa njengoba ifunwa kakhulu futhi ihambisana neqiniso lokuthi iFox Red Lab iyivelakancane kuneYellow noma iBlack Labradors, akumangazi ukuthola umdlwane obiza u- $ 1 000.
Abafuyi Bebomvu Lab
Khetha kakhulu futhi ukhethe lapho ukhetha ikennel ozothenga kulo. Hlola ubuqiniso bomfuyi bese uthatha umzamo wokuqonda ukuthi kungani bekhethe ukuzala iRed Labradors.
Gwema ukuthenga injana yakho entsha kumuntu ongakwazi ukukhiqiza ukuhlolwa kwezempilo kwesitoko sabo sokuzala.
Uhlu lwe-AKC Abalimi beLabrador kusayithi labo, okwenza kufinyeleleke kuwe ukuthi useshe lezi zinja ezinhle.
Nakhu okumbalwa okungenzi umbala kube yinto eza kuqala, kepha faka amaRed Labs ohlelweni lwabo lokuzalisa:
Ixwayisa Amalebhu (I-Albion, NY)
Ukubuyiswa kwePenara Labrador (UCollins, mina)
Amalebhu eDaisy Mountain (IPhoenix, AZ)
IBlackfork Labradors (IHodgen, KULUNGILE)
I-Red Diamond Fox Labradors yesiNgisi Ebomvu (UHumboldt, KS)
ILabradors ijabule impela njengemidlwane futhi ababaningi abantu abakwaziyo ukufanisa intshiseko yabo. Uma ungenandaba nenja endala, unganikeza iFox Red Labrador endala ikhaya elisha.
Izinja ezindala zingafika nezinselelo zazo. Ngenkathi abanye bengenazo izinkinga zokuziphatha, eziningi zidinga ukuqeqeshwa kabusha.
Ukuze uthole ukuthi ngabe ikhona yini inja ekufanele, finyelela kokuhlenga okulandelayo:
I-Lab Rescue LRCP (U-Annandale, VA)
Ukusindiswa KweLabrador Retriever yaseFlorida (IPompano Beach, FL)
Ukutakulwa Kwe-Golden Gate Labrador Retriever (ISan Francisco Bay Area, CA)
ILabradors ingenye yezinja ezinhle kakhulu ongazithola. Ziyavuma ngokwedlulele futhi kuyintokozo ukuba seduze kwazo.
Noma kunjalo, uma ufuna ukukhombisa inja yakho, ungahle uthande ukuya kumbala wendabuko ongaphezulu njengoba uzoba sengozini ngeLabrador Ebomvu.
Zingcono kakhulu njengezinja ezisebenzayo noma izilwane ezifuywayo zomndeni, okungcono ekhaya elisebenzayo.
Mop Mop Inja Konke Okudingeka Ukwazi NgeKomondor
IGoldendoodle: Ingabe lokhu kuyindlela efanelekile kuwe?
amagama abafana ezinja ezincane
ithoyizi poodle elihlanganiswe ne-pomeranian
yini imorkie exutshwe